NAN IYYA - OPride.com
Nan iyya, nan iyya
Uu’uu labsa biyyaa
Waayee biyyaa na muddee
Onnee tiyya daran hiddee
Kunoo na iyyisiisa
Dhiiga keessa lixee
Hidda kiyya mixee
Gubee na dirqisiisa!
Iyyi-koo iyya imimmaanii-ti
Imimmaan-koo imimmaan dhiigaa-ti
Dhiigni-koo dhiiga qulqulluu
Kan ilmoo namaa-ti!
Qeyee-kootu akkas onee
Mana-koo keessa yeeyyiin sonee
Bosona kiyyatoo gubatee
Aadaa kiyyatoo huqqatee
Yeeyyiitoo beela biyya fidee
Bashootu yeeyyiitti michoomee
Yeeyyiitu foon namaatiin coomee
Yoon iyye maalum qaba
Silaawoo jarri hudhee
Miila lachuuwoo hidhee
Iyyeen iyya hundatti dabarsa
Saba kiyyan guutumatti labsa
Kan rafen uu’uu-dhaan dammaqsa!
Hamma kokkeen na madaawutti
Hamma qooqni na hurraawutti
Laga gamanaa gamaatti
Muummee garanaa garasiitti
Qeyee Oromoo hundatti
Biyyoota Kuush maratti
Galmaa fi caffeetti
Manaa fi bakkeetti
Bokkuu fi calleetti
Odaa fi siiqqeetti
Waddeessaa fi caaccuutti
Imaamaa fi kallachatti
Coqorsaa fi bunatti
Faajjii saba kiyyaatti
Miiddhaa saba kiyyaa!
Ilaa, haa-beeku dhaloonni qubee:
Kunoo, biyya jarri gube
Eekaa, haqaa-mirga jarri hube
Aayyoo jarri ukukkube
Obboleettilee jarri soqole
Obboleessilee jarri fonqole
Jaarsa waggaa saddeettamaa
Jaartii waggaa saddeettamaa
Oromiyaa jiituu hongeeffamte
Harmilee jaraan madeeffamfte
Nan iyyaa, iyyi-koo bira haa dhaabatu
Yoon iyyuu dhiise
Ayyaanni warra gorra’amee anaa gaafatu!
Iyya-koo haa dhagawu
Reeffi kan jagnootaa
Mee iyya-koo haa caqasu
Na wajjin iyyee iyyee
Kan dhagawuu dide haa kakaasu
Kan beekaa rafe haa dammaqsu
Na waliin biyya kaasee haa labsu!
Gaarran mara koree
Laggeen hunda maree
Goorolee cufa qaxxaamuree
Sululoota mara addaan-muree
Uu’uu labsa biyyaa!
Yoo namni na dide
Yookaan callisa fide
Bineeyyii Oromiyaa marattan
Shimbirroolee fi allaattiittan
Horii alaa manaattan
Xiqqaa guddaa saaniittan
Harmaa fi harkaa Aannooleen waammaddha
Daabee Calanqoo fi Gullalleettan
Uu’uu saba kiyyaa:
Nuu fidaa tokkummaa
Nuu kennaa wajjummaa
Uggum yaa filannoo
Safuu yaa waliigaltee
Uu’uu yaa waliimarartee
Jiraa fi kan du’en waammaddha!
Halkan homaan raffu
Guyyaas homaan taa’u
Gaddeen hunda keessan laba
Manneen cufa keessan gala
Iyyaan imimmaan dhangalaasa
Qeensan fuula of-cireen
Ani gonkumaa hin dhiisu
Takkallee gad hin ciisu
Hanga saba kiyyarraa
Hanga biyya kiyyarraa
Hamma bilisummaan gonfatamutti
Hamma walabummaan uffatamutti
Hamma birmadummaan mirkanaawutti
Nan iyya, nan iyya an iyya-koon dhiisu
Dagaddhee gaaf tokkollee gadin-ciisu!
Uu’uu yaa biyya uu’uu!
Barliin, 26. 07. 08
Dubbiftoota jaalatamoo fi kabajamoo,
nan iya oromia oromo taammanaa
Sichooraa A B says:
Hayyee nama qalbifatee dubbiseef walaloonkee ergaa(dhaamsa) jabaaf ofkeessaa qaba yaa dhiigakoo, hedduu galatoomi, horii buliin siin jedhaa !